Posted on May 27, 2020 फेब्रुअरी 1, 2022 द्वारा Alicia Butler
यदी तपाइँ कसरी भन्न पनि जान्नुहुन्न नमस्कार अन्य भाषाहरूमा, these most common French phrases will at least get you through the door of your favorite French restaurant.
फ्रान्सेली भाषा सिक्दै (विशेष गरी नेटिभ अंग्रेजी स्पिकरको रूपमा) थोरै डरलाग्दो छ. जर्मन भाषा भन्दा फरक, ल्याटिनबाट फ्रेन्च ड्र, सबै भन्दा रोमान्टिक भाषाहरु जस्तै. भाग्यवश, फ्रान्सेली भाषी राष्ट्रमा जानु भन्दा पहिले तपाईले प्रत्येक शब्द र वाक्यांश सिक्नु हुँदैन.
Some of the most common French phrases are greetings. अभिवादन प्राय: प्रयोग हुने वाक्यांश हो जब फ्रान्स मा यात्रा. धेरै यात्रीहरूले कसैलाई अभिवादन गरे पछि दाबी गर्छन्, तिनीहरू प्राय: आफ्नै मातृभाषामा पूर्वनिर्धारित हुन्छन् (जबसम्म फ्रान्सेली वक्ताले भाषा बोलेको थाहा हुन्छ).
हाम्रो सबैभन्दा राम्रो नयाँ भाषा सिक्नका लागि सल्लाहहरू? सबैभन्दा धेरै सामान्य वाक्यांशहरूसँग जानुहोस्. जब यो यात्रा को लागी आउँछ, तपाईंलाई अर्का ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि तपाईं आफ्नो शस्त्रागारमा केहि शब्दहरू पनि देख्न चाहानुहुन्छ - र होटेल वा एयरबएनबीमा के भन्नु हुन्छ जान्नुहोस्।. These most common French phrases for traveling will help get you in, कुनै पनि फ्रान्सेली भाषिक देशको वरिपरि र पछाडि.
फ्रान्सेली भाषी देशको वरिपरि पुग्नु गाह्रो हुन्छ जब तपाईंसँग जहाँ पुग्न चाहानुहुन्छ त्यहाँ पुग्ने सही शब्दावली छैन।. You’ll want to memorize these most common French phrases and French words if you’re planning on traveling without an interpreter.
Posted in French Language, Tips and Tricks, TravelLeaveaComment खुल्ला साझा फ्रान्सेली वाक्यांशहरू
फ्रेन्चमा शुभ प्रभात
Posted on जनवरी 8, 2022 द्वारा Alicia Butler
फ्रेन्चमा सुप्रभात कसरी भन्न जान्नुहोस्, कहिले भन्ने, र यदि तपाइँ फ्रान्सेली बोल्ने नौसिखिया जस्तो देखिन चाहनुहुन्न भने के गर्नबाट बच्ने.
तपाईंले अन्य भाषाहरूमा भन्न सिक्न सक्ने सबैभन्दा सामान्य वाक्यांशहरू मध्ये एक हो, "शुभ - प्रभात।" तपाईलाई मात्र थाहा भए पनि विभिन्न भाषाहरूमा कसरी सुप्रभात भन्न, तपाईं कम्तिमा अपरिचित र साथीहरूलाई समान रूपमा अभिवादन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ - र त्यसो गर्न रमाइलो गर्नुहोस्, सुखद तरिका!
कसरी फ्रान्सेली मा शुभ प्रभात भन्न
सुप्रभात फ्रान्सेली मा भन्न को लागी सबै भन्दा साधारण वाक्यांशहरु मध्ये एक हो! तपाईं यो वाक्यांश धेरै दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (हामी अंग्रेजी बोल्ने देशहरूमा जस्तै बिहान वा दिउँसोको पहिलो कुरा मात्र होइन).
फ्रान्सेलीमा शुभ प्रभात भन्न, तपाईले भन्नु हुन्छ, "नमस्ते!"
मा फ्रेन्च, उच्चारण सबै कुरा हो (वा व्यावहारिक रूपमा सबै कुरा, कमसेकम)!
फ्रान्सेलीहरूले धेरै माफ गर्न सक्छन् जब यो उनीहरूको भाषालाई मार्ने कुरा आउँछ, तर गलत उच्चारण गर्नेहरूलाई तिनीहरू हल्का रूपमा हेर्दैनन्. वास्तबमा, शब्दहरू गलत उच्चारण गर्नु फ्रान्सेली विद्यार्थीहरूले गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो अपराधहरू मध्ये एक हो!
जब फ्रान्सेलीमा शुभ प्रभात भनिन्छ, bonjour उच्चारण गर्न, तपाईं केवल शब्द बाहिर ध्वनि र भन्न प्रलोभन हुन सक्छ, "बहन-जुर।" र यो हाम्रो अङ्ग्रेजी कानको लागि एकदमै अफ-बेस होइन, फ्रान्समा यो व्यावहारिक रूपमा अपराध हो. यदि तपाइँ bonjour भन्न चाहानुहुन्छ र स्थानीय जस्तै आवाज, तपाईं भन्न चाहनुहुन्छ, "बाउन-झूर।"
यदि तपाइँ साँच्चै एक स्थानीय जस्तै आवाज गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले भाषा अनुवाद एपको साथ फ्रान्सेली शब्दहरू भन्न अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, Vocre जस्तै.
Vocre पाठ-देखि-वाक् प्रस्ताव गर्दछ, भाषण-देखि-पाठ, र भ्वाइस-टू-भ्वाइस अनुवाद पनि. The best part is that you can download the app on your phone when you have wifi or cell service and continue to use it even if your signal is lost.
Vocre मध्ये एक हो उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू मा उपलब्ध छ iOS को लागि एप्पल स्टोर वा एन्ड्रोइडका लागि गुगल प्ले स्टोर.
कहिले बोन्जोर भन्ने
Bonjour धेरै परिस्थितिहरूमा सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ - पहिलो पटक उठ्दा कसैलाई शुभ बिहानको कामना गर्न मात्र होइन!
अमेरिकामा. (र अन्य अंग्रेजी बोल्ने देशहरू), हामी प्रायः जब हामी पहिलो पटक उठ्छौं तब मात्र शुभ प्रभात भन्छौं. तर अन्य देशहरूमा, यो बिहान भर प्रयोग गरिन्छ, अक्सर सही सम्म 11:59 a.m.
Bonjour पनि एक अनौपचारिक शब्द र एक अर्ध-औपचारिक शब्द हो, मतलब तपाईं साथीहरूसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफन्तहरु, and even some people you’ve just met.
अंग्रेजी बोल्ने देशहरूमा, हामी शुभ प्रभात वाक्यांश धेरै अनौपचारिक रूपमा प्रयोग गर्दछौं, यद्यपि हामीले एक अपरिचित व्यक्तिलाई सडकमा पार गर्दा शुभ प्रभात पनि भन्न सक्छौं.
त्यस्तै, तपाईं आफ्ना साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूलाई फ्रेन्चमा शुभ प्रभात भन्नको लागि बोन्जोर शब्द हुन सक्नुहुन्छ, पनि.
फ्रान्सेलीमा पागल कुरा यो हो कि तपाइँ कसैलाई बोनजोर भन्न सक्नुहुन्छ, प्रायः दिनको कुन समय होस् भन्ने वास्ता नगरी! It’s appropriate to say bonjour to others throughout the day — often until just before evening.
यसको मतलब यो हो कि बोनजोरको अर्थ शुभ प्रभात मात्र होइन, तर यसको अर्थ शुभ दिन पनि हो, पनि.
तपाईंले परिचित वा अनौपचारिक रूपमा कसैलाई अभिवादन गर्न बोनजोर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंले अर्ध-औपचारिक परिस्थितिहरूमा पनि बोनजोर भन्न सक्नुहुन्छ, पनि.
यसलाई यसरी विचार गर्नुहोस्: यदि तपाइँ कार्यक्रममा व्यवसायिक-आकस्मिक शैली लगाएर हुनुहुन्छ भने, तपाई सायद बोन्जोर भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो शब्द उचित रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भनेर विचार गर्न सक्नुहुन्छ. यसको मतलब तपाईले यो वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अंग्रेजीमा व्यापार बैठकहरू र फ्रान्सेली मा.
उदाहरण को लागी, तपाईं यसलाई अन्त्येष्टिमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न, ठूलो महत्वको कसैलाई अभिवादन गर्न, or to meet someone of much higher stature.
फ्रान्सेलीमा सामान्य गल्तीहरू (वा कसरी नौसिखिया जस्तो आवाजबाट बच्ने)
त्यहाँ धेरै छन् फ्रेन्च बोल्ने प्रयास गर्दा अंग्रेजी स्पिकरहरूले प्रयोग गर्ने सामान्य गल्तीहरू. जब तपाइँ यी गल्तीहरू गर्नुहुन्छ, you’ll sound instantly likeanovice.
फ्रेन्च सिक्ने क्रममा अंग्रेजी बोल्नेहरूले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सामान्य गल्तीहरू शाब्दिक अनुवादहरू प्रयोग गर्ने समावेश गर्दछ (शब्दको लागि शब्द अनुवादहरू), गलत उच्चारण गर्ने शब्दहरू (फ्रान्सेली मा एक प्रमुख गलत पास), र झूटा साथीहरू मिलाउँदै (वा अंग्रेजी शब्दहरू जस्तै फ्रान्सेली शब्दहरू प्रयोग गर्दै).
शाब्दिक अनुवादहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
हामी सबै त्यहाँ पुगेका छौं: हामी शब्दको लागि फ्रान्सेली वाक्य शब्द ह्याक गर्ने प्रयास गर्छौं. सट्टा, हामी वाक्यको हत्या मात्र गर्छौं, शब्द, वा वाक्यांश! अंग्रेजी देखि फ्रान्सेली अनुवाद यसका कारण कठिन छन्.
तपाईं एक नौसिखिया फ्रान्सेली वक्ता हुनुहुन्छ भनेर देखाउने सबै भन्दा राम्रो तरिकाहरू मध्ये एक शाब्दिक अनुवादहरू प्रयोग गर्नु हो. सबैभन्दा सामान्य रूपमा बोच गरिएको फ्रान्सेली अनुवादहरू मध्ये एक बोन माटिन हो.
बोन भनेको शुभ र माटिन भनेको बिहान हो. यसको मतलब तपाईं शुभ प्रभात भन्न यो वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सहि?
यदि तपाईं बोन माटिन भन्नुहुन्छ, सबैले तुरुन्तै थाहा पाउनेछन् कि तपाईं फ्रान्सेली भाषामा नयाँ हुनुहुन्छ. आफै गर्नुहोस् (र सबैजना जो अन्ततः तपाईंको लागि भयानक रूपमा लज्जित महसुस गर्न सक्छन्) र कुनै पनि हालतमा यो भन्नबाट जोगिन.
उच्चारण फ्रेन्च सिक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुक्राहरू मध्ये एक हो. धेरै अङ्ग्रेजी वक्ताहरूले शब्दहरू बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्छन् र पूर्ण रूपमा बङ्गलिंग उच्चारण समाप्त गर्छन्.
जब तपाइँ एक शब्द गलत उच्चारण गर्नुहुन्छ (विशेष गरी यदि तपाइँ यसलाई अंग्रेजी शब्दको रूपमा बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने), you’ll inadvertently end up broadcasting to every French speaker in earshot that you’reaFrench novice.
यदि तपाईं आफ्नो फ्रान्सेली श्रोताहरूलाई प्रभावित गर्न चाहनुहुन्छ भने (वा, इमानदार बनौं: केवल तिनीहरूलाई अपमानित गर्नबाट जोगिन), प्रत्येक शब्दको सही उच्चारण सिक्नुहोस्. यो गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको शब्दको उच्चारण सुन्नु हो.
तपाईं भाषा अनुवाद एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै Vocre, that offers text-to-voice translation.
झूटा साथीहरू शब्दहरूका लागि शब्द हो जुन दुई भाषाहरूमा एउटै हिज्जे गरिन्छ तर दुई पूर्ण रूपमा फरक अर्थहरू छन्.
फ्रान्सेलीमा, त्यहाँ धेरै शब्दहरू छन् जुन अंग्रेजी शब्दहरू जस्तै देखिन्छन्, यद्यपि तिनीहरूको अर्थ पूर्ण रूपमा फरक छ.
सामान्यतया दुरुपयोग हुने फ्रान्सेली झूटा साथीहरूको उदाहरणहरू सिक्का समावेश छन् (अंग्रेजीमा यसको अर्थ सिक्का पैसा हो; फ्रान्सेली मा, यसको अर्थ कुना हो), नगद (उल्टो, यो अंग्रेजी शब्द पैसा जस्तो देखिन्छ तर यसको अर्थ परिवर्तन हो), र हाल (जुन वास्तवमा अङ्ग्रेजी शब्द जस्तो देखिन्छ तर 'वास्तवमा' भनेको अहिले फ्रान्सेलीमा हो).
जब हामी अभ्यास गर्दैछौं हामी हाम्रो उत्तम निर्णय प्रयोग गर्न सक्छौं वा शब्दको अर्थ के हो अनुमान गर्न सक्छौं, but it’s always best to know or ask whataword means if you’re trying to impress your French friends.
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।?
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।, तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।, तिमीलाई कस्तो छ, तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो, तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।! तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।:
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।: नमस्कार
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।?: तिमीलाई कस्तो छ?
नमस्कार: तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।: तपाईँलाई भेटेर खुशी लाग्यो
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।?: तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।?
तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।? तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ। (तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।, तर यदि तपाइँ आफ्ना फ्रान्सेली साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्न वा सोध्नु सधैं राम्रो हुन्छ।).
तपाईं यो वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं कसैलाई अलविदा भन्नुहुन्छ (विशेष गरी यदि त्यो व्यक्ति एक व्यक्ति हो जससँग तपाईं थोरै औपचारिक हुनुहुन्छ — जस्तै ग्राहक वा सडकमा अपरिचित).
यदि तपाईं साथी वा नातेदारहरूसँग थोरै कम औपचारिक हुन चाहनुहुन्छ भने, you can always say salut instead of saying hello or goodbye.
Salut फ्रान्सेली बराबर को क्रमबद्ध छ, "हेर, के छ?"यो बेलायतीहरूले भनेको जस्तै हो, "चीयर्स,” instead of saying hi or bye.
नमस्कार को सीधा अनुवाद मोक्ष हो. यो शब्द बोल्दा, अन्तमा T ध्वनि नभन्नुहोस् (तपाईले आफैलाई फ्रान्सेली बोल्ने नौसिखियाको रूपमा तुरुन्तै छोड्नुहुनेछ!).
जे गरे पनि, नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा टोस्टिङ गर्दा सलाम नभन्नुहोस् (वा त्यो कुराको लागि कुनै अन्य समय!).
अङ्ग्रेजी वक्ताहरूले अक्सर सलुटको दुरुपयोग गर्छन् किनभने सलाम भनेको हो आफ्नो स्वास्थ्य को लागी इटालियन मा. फ्रान्सेलीमा, यो सबै मतलब छैन. यदि तपाइँ फ्रान्सेलीमा टोस्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँ भन्नु पर्छ, "चीयर्स,”वा, "चीयर्स," जसको अर्थ दुबै हो आफ्नो स्वास्थ्य को लागी फ्रान्सेली मा.
फ्रान्सेलीमा अर्को सामान्य अभिवादन बिएनवेन्यू हो, जसको सरल अर्थ हो स्वागत छ.
तपाईले के गर्न चाहनुहुन्न भनेको वाक्यांश बिएनवेन्यू प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाई भन्न चाहानुहुन्छ, "तपाईलाई स्वागत छ,"फ्रेन्चमा. These two phrases mean two entirely different sentiments.
भन्न चाहनुहुन्छ भने, "तपाईलाई स्वागत छ,"फ्रेन्चमा, तपाईले भन्नु हुन्छ, "तपाईलाई स्वागत छ," जसमा अनुवाद हुन्छ, यसको कुनै अर्थ छैन.
केहि थप सिक्न तयार छ सामान्य फ्रेन्च वाक्यांशहरू?
नयाँ कसैलाई भेट्नको लागि सामान्य वाक्यांश र शब्दहरूको सूची तल छ, सोध्दै (विनम्रतापूर्वक) यदि एक फ्रान्सेली वक्ता पनि अंग्रेजी बोल्छन्, तपाईं अलविदा भन्न चाहनुहुन्छ, वा यदि तपाईं फ्रान्सेली बोल्नुहुन्न भनेर व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ भने (अझै!).
के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ?: के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ?
मलाईं माफ गर्नुहोस्: मलाईं माफ गर्नुहोस्
म फ्रेन्च बोल्दिन: म फ्रेन्च बोल्दिन
श्रीमती/श्रीमती/मिस: श्रीमती मिस्टर मिस
माफ गर्नुहोस्: माफ गर्नुहोस्
पछि भेटौँला!: चाडै भेटौला!
धन्यवाद / धेरै धेरै धन्यवाद: Merci/merci beaucoup
Posted on डिसेम्बर 17, 2021 द्वारा Alicia Butler
Posted on जनवरी 19, 2021 द्वारा Alicia Butler
अनुवाद संग समस्या
तपाईंले अनुवादको साथ केही सामान्य समस्याहरूको सामना गर्नुभएको हुन सक्छ।:6तपाईंले अनुवादको साथ केही सामान्य समस्याहरूको सामना गर्नुभएको हुन सक्छ।
तपाईंले अनुवादको साथ केही सामान्य समस्याहरूको सामना गर्नुभएको हुन सक्छ।
तमिलमा शुभ प्रभात
उत्तम भाषा अनुवाद अनुप्रयोगहरू